Jery taratra… herinandro: mamerim-panadinana… | NewsMada
Jery taratra… herinandro: mamerim-panadinana…
Vita ny fanadinam-panjakana CEPE, na somary nitombo tsy toy ny isan-taona aza ny tahan’ny mpiadina tsy tonga. Misy15 ny ivontoeram-panadinana tsy afa-niatrika fanadinana ny mpiadina: 14 ao amin’ny Cisco Anosibe Anala, ary iray any amin’ny Cisco Sambava. Anisan’ny nahatonga izany ny tsy fahatongavan’ny laza adina. Mbola hanao fanadihadiana ny minisitera ny Fanabeazam-pirenena. Heverina amin’ny 28 aogositra ny fanadinana amin’ireo ivontoerana ireo.
Mitombo an-dalana ny isan’ireo kandidà ho filohan’ny Repoblika nanatrika ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). Tafakatra 14 izany izao. Nolavin’ny HCC ny fangatahan’ny olom-pirenena tsotra iray ny hanafoanana ny fifidianana filohan’ny Repoblika, satria ny andrimpanjakana sy ny eo anivon’ny vondrombahoakam-pirenena no afa-manao izany fangatahana izany eny anivon’ny HCC.
Mitombo an-dalana ny antoko sy fikambanana manohana ny kandidà Rajoelina Andry ho filohan’ny Repoblika. Anisan’izany ny Antoko MMM, nilaza fa kandidà efa niomana ela izy ary manana vinam-piarahamonina hahazoana mampandroso an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny IEM. Eo koa ny Emergence de Madagasikara, nanambara fa izy irery ihany no hahavita hanavotra ny Malagasy sy hamerina ny fahataran’ny Malagasy amin’ny fanatentarahana ny vina IEM.
Mitohy ny hetsiky ny HFI eny amin’ny kianjan’ny 13 mey, na tsy mahazo olona aza.
Nilaza ny filoha mpanorina ny MDM fa samy laharam-pahamehana ny fifidianana sy ny fanorenana ifotony, mifameno fa tsy mifanohitra. Tokony hotanterahina araka ny tetiandro efa voafaritra àry ny fifidianana ho fanajana ny lalàmpanorenana sy ny fifandimbiasam-pahefana demokratika. Na izany aza, mila manome toky izay filohan’ny Repoblika eo fa hanao fanorenana ifotony.